Kedu ihe a na-ewere dị ka ọkwa dị larịị? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Nzọụkwụ dị elu - esi eme ihe
Nzọụkwụ dị elu - esi eme ihe
Kedu ihe a na-ewere dị ka ọkwa dị larịị?
Nke nkpodaa kọwara ugwu dị ka ugwu nke nwere ụkwụ 15, ma ọ bụ karịa, na-ebili elu karịa 100 ụkwụ nke ọsọ na-agba ọsọ, ma ọ bụ 15%ndida(Nyocha 1).
dịkwa mma bri chọrọ geometer sketch pad applet ebe a ka ị lelee steepness na mkpọda na otu ha si metụta ma enwere m ahịrị abụọ na tụọ mkpọda ha ị nwere ike ịnwe otu n'ime ndị a ugbu a dịka mkpọda ahụ bụ otu maka m1 mkpọda 1 m2 mkpọda - ọ dị mma nke a na-adị mfe mgbe ị hụrụ na mkpọda ahụ bụ otu yabụ na ị nweghị ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ahịrị mana m na-eme nke a 1/5 nke acha anụnụ anụnụ na acha uhie uhie ugbu a 6 anyị hụrụ na acha uhie uhie bụ obere steepụ mgbe m mere ihe na-acha anụnụ anụnụ 3 na uhie 1 2 anyị hụrụ ugbu a na-acha anụnụ anụnụ bụ obere obere steepụ, anyị kwesịrị iburu n'uche ebe a na ọnụ ọgụgụ buru ibu nwere steepụ steepụ na mgbalị ndị na-eme ka uche6, dị ukwuu karịa 3 na eriri uhie dị elu karịa akara na-acha anụnụ anụnụ ugbu a naanị ebe ị nwere ike iche na nke a na-enwetụ ọhụụ mgbe anyị ga-enweta ihe na-adịghị mma n'ihi n'eziokwu bụ ihe dị ka ihe na-adịghị mma 5 abụghị nnukwu karịa abụọ mana naanị ihe ị hụrụ ebe a bụ mkpọda nke Thelin na ebe a bụ acha anụnụ anụnụ, na-adịghị mma ise dị elu karịa onye nke mkpọda ya bụ abụọ ebe a, nke yiri ebe a ma ọ bụrụ na notice hụrụ ebe a na asaa adịghị mma abụghị ihe ngọpụ, isii na-adịghị njọ karịa mwepu 5, mana ọ bụ n'ezie steeper yabụ kedu ka anyị ga esi edozi nke a n'ụzọ dị mfe ? anyị na-eji uru zuru oke nke ọnụọgụ ndị a, ọ dị mma, yabụ ọ bụrụ na ị hụ ebe a ka anyị leba anya na uru zuru oke nke mkpọda na-acha ọbara ọbara na-acha anụnụ anụnụ, ọ dị mma, yabụ ka anyị lee anya ebe a, yabụ enwere m mkpọda nke mwepu2 maka uhie otu Line na mkpọda mwepu 3 maka Na akara na-acha anụnụ anụnụ anyị hụrụ na oke uru nke blueslope a dị ukwuu karịa n'ihi na ụkpụrụ zuru oke dị atọ, ebe oke uru nke ọbara ọbara dị abụọ, anyị hụkwara na akara na-acha anụnụ anụnụ dị elu bụ, ọ bụ ezie na ọnụọgụ anyị na-ele anya bụ mkpọda adịghị mma atọ na nke na-adịghị mma, atọ na-ezighi ezi karịrị abụọ na-adịghị mma ọ na-esiri ike ịkọ onye ga-arị elu n'emeghị ụkpụrụ zuru oke ebe a , ọ dị mma ka anyị ghara ịnwale ịgbanwe mkpọda ahụ uru zuru oke, anyị na-anwa ileba anya na ọnụ ahịa zuru oke nke mkpọda ahụ, yabụ ka anyị lelee ebe a, ọ bụrụ na anyị ga-ewere mkpọda nke mwepu asaa, ewela iwe ng nke mwepu isii na mkpọda nke mwepu ise ụkpụrụ ha zuru oke ga-abụ isii na ise, yabụ tha t isii buru ibu, ọ na-adị elu karịa ya mere, mgbe anyị hụrụ ebe a, nke a bụ ọnọdụ nke mkpọda nke mwepu 2 na mwepu 1 nke ọma ma ọ bụrụ na ị na-ele ụkpụrụ zuru oke nke 2 na 1, acha uhie uhie bụ onye uru ya zuru oke bụ 2 na otu dị elu ma wee na-aga ọzọ mgbe anyị na-emeso steepness ahụ na mkpọda ahụ dị mfe, yabụ anyị hụrụ mkpọda nke uru ya zuru oke buru ibu karịa nke mkpọda uru zuru oke pere mpe bụ nke na-atọ ụtọ, nke ahụ bụ ihe ị ga-achọ ịma n'ezie gbasara mkpọda ahụ na otu o si metụta ọnụ ọgụgụ ahụ
Kedu ihe enyere steepụ ụzọ dị larịị?
1. Canton Okporo ụzọ, Pittsburgh, Pa.; 37 percentgrajentị. Nke a bụsteepụederede ederede ọhan'okporo ámána United States, ma eleghị anya ụwa. Ọ bụ ezie na ya 37 percentọkwanaanị gbatịrị banyere 21 ụkwụ, ọ ka na-akwụsị ndị na-eje ije na ndị na-agba ịnyịnya nwụrụ na egwu ha.Mar 3 2014
Ọ bụ na Harlech na Wales adịghị amacha, James? - Ee, enyi. Oh ọ dị mma - you maara na Harlech Castle malitere mbido ya na 1283 na ọ bụ ebe ewusiri ike nke Owain Glyndwr, nwoke Welsh ikpeazụ na-azọrọ aha Onyeisi? nke Wales? Abụ a ụmụ nwoke nke Harlech, nke ọma, ọ dị ihe dị ka afọ asaa nke nnọchibido nke nnukwu ụlọ ahụ na 1481? - M pụtara, nwunye, nke a bụ ihe na-atọ ụtọ ma ihe niile dị mma, mana kedu ihe mere ị ji kpọta m na North Wales na February iji nye ya? m ihe mmuta? Iji mee ihe ziri ezi, agara m enwe ike ịkọwa ya. - Chere, chere, chere.
N'ihi na Harlech na-ekwukwa na ya nwere okporo ámá dị larịị n'ụwa. Ọ nọkwa ebe ahụ. Ọfọn, ọ dịghị mkpa na ha ga-azọrọ ọzọ.
Ma mgbe m tufuru aha ahụ na World Cup of Cricket, ọ bụghị ezigbo izu maka Kiwis - Ollie mere ka m bịarute North Wales n'etiti etiti oge oyi iji hụ ma ọ bụrụ na anyị ga-azọrọ ịrịgo kachasị ọsọ nke ụzọ kachasị elu n'ụwa. GCN nwere ike. Ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume, mana Ollie nwere ntụkwasị obi dị ịtụnanya. Buddy, nke a dị larịị. (James chịrị ọchị) Wales na New Zealand dịcha mma, enyi, ha abụọ nwere oke mmiri ozuzo, ha abụọ nwere ugwu - ha abụọ hụrụ atụrụ n'anya - ee, mana New Zealand nwere kiwis, Wales nwere egbe. - Nwere kites.- Dị ka Strava si kwuo, ịrịgo ahụ bụ mita 330 n'ogologo ya na gradient nke 16%, nke bụ 36 ebe a.
wuo nke gi espresso igwe
Ya mere, anyị chere na anyị ga-atụ ya n'onwe anyị iji hụ ma ọ bụ n'ezie, James, ị chetara GCN dị elu? Nchoputa? - Ee enyi - Kedu ihe ọ bụ? - Gini, ekwentị m. Kedu? Ha na-eme ihe niile n’ụbọchị ndị a. Lee anya na, 36% echeghị m na ị nwere ike ịnya ịnyịnya a - naanị m na-ele Strava na ọ bụ naanị ihe dịka mmadụ 600 nọ ebe a, echere m na anyị nwere ezigbo ohere ịnweta KOM n'okporo ụzọ dị larịị nke !Wa! Kedu ka nke ahụ si dị mma? - Iji mara mma, nke a ga-adị mma. - Ee. - Ma, ọ bụ otu ụzọ, ọ bụghị ya? - Echegbula onwe m, echere m nke ahụ.
N’elu ụlọ anyị nwere otu nwoke nwere akara. Agwara m ndị obodo, ha gbochiri ụzọ karịsịa maka anyị. - Na, enyi, ọ bụ ridiculously nkpoda, M ike na-bilie ebe. - Echere m na nke ahụ.
Echere m otu ụbọchị na 22 mph tailwind. Ọ ga-abụ ihe ịtụnanya! - Mana ị cheghị ya, enyi, enweghị m igwe kwụ otu ebe ka m nweghị ike ịme ya. - Ee, m juru n'ọnụ ya n'ihi na ị. - Ndi ị? - Ee. - Oh nwunye.
Nke ziri ezi, echere m na m dị njikere. - you dịla njikere, ị chọrọ ịnwale? - Debe taya m. - Ezigbo traction, ọ masịrị m. - Ọ dị mma, lee ihe anyị nwere ike ime. - Hụ ma ị ga-emeli ya. (Oge nhazi oge) - Na sadulu! - Ihe James amaghị bụ na agbanwere m ngwa ya maka 39: 23 (ọ chịrị ọchị)! - Ọ na-aga nke ọma. (egwu sitere n'aka orchestral) - Na-efe elu n'ebe ahụ, olee otú ọ dị? - huh? - Olee otú ọ dị? - O siri ike. - Ee? Ọ siri ike - Ee.
Egwuregwu ziri ezi, nke ahụ! - Ebee ka ị hụrụ nke a? - N'ihi na ị nwetara 1: 26.1 nwetara: 26 bụ nke abụọ, ị bụghị ụbọchị, mana ị ga-adị. - Oh, 2 ..- Ezigbo 1.2. na steepụ nke kachasị elu n'ụwa, nke ahụ dị mma, nke ahụ.
Odi mma, echere m na obu oge nke gi. - Oh chukwu, aga m enye ya a laa. - Mana ị nwere igwe kwụ otu ebe. (Ollie scoffs) Mfe, okpu agha na-arị elu, ikuku ikuku.
Buddy, nke ahụ bụ ihe niile, nke a bụ nke gị. Enwere m ike ịnụ ya (egwu egwu egwu) Obi dị m ụtọ na ya 1: 26 chere obere oge, Ollie, ị nọ na e-igwe? ọ bụ Ollie na e-igwe kwụ otu ebe? (egwu sitere n'ike mmụọ nsọ) (James chịrị ọchị), Ollie! o na efe n’elu ebe ahu, enyi. - enyi. - Nice skid, fair play, i wete e-bike. - Amaara m - I wetara e-igwe kwụ otu ebe gị. - Ị ma nke mere? Emere m ya.
Emere m ya ma mee ya, ọ bụghị ya? - now bụ ugbu a onye kachasị ọsọ n’ụwa n’ụwa ịrịgo ugwu kacha sie ike n’ụwa. Amaara m na ọ dị mma, m na-ekwu - Kedu ka nke ahụ si adị? - Ọ dị oke mma, m na - ekwu, ihe ndekọ a ga - adịru mgbe ebighi ebi. Enweghi ike ihu onye obula iti ihe a, a na m ekwu onye ga-enwe nwute ichere maka ubochi nke oduhu, nweta ndumodu iji gbochie uzo ma weta e-igwe? - Ọ dịghị onye ọ bụla, Buddy - Ọ dị mma ụmụ okorobịa? - Onye bụ onye ahụ? Buddy, nke a bụ Dan Evans, mba, nke ọma, ọtụtụ onye mmeri mba ugwu.
Gịnị ka ọ bụ? ọ na-eme ebe a? (epic orchestral music) - Buddy, ọ nwere ike ọ gaghị enweta ya. Ee, ọ bụ onye mmeri nke mba na ee, ọ nwere ike ịnọdụ ala na 800 watts maka nkeji, mana onye ọlụlụ, ọ dị mmiri mmiri, ọ dị mmiri mmiri, ma ị dị ngwa karịa. Got nwetara ya. - Ee, echere m na ị ziri ezi.
Oh, m nwetara email. Mmadu were KOM gi. - Mba - adikwa, enyi? - Kedu ka ị mere? - Ee adị m mma.
Kedu ka ị mere? - Ezigbo onye na - egwu egwu - Ee, ọ dị mma. - Tụkwasị onwe gị obi ịbịa! - Ọfọn, otu n'ime ugwu m dị na mpaghara! - Gini ka o gha adi n'uwa na nke ozo? - 600 watts maka nkeji na 11. Nnukwu mgbalị. - I mere ka ọ dị mfe. - Ah, ọ siri ike, ịrịgo siri ike. - Ya mere, ị rịgoro ọtụtụ ugwu.
Olee otú o si anya? - Ọfọn, ọ bụ n'ezie usoro nkpoda dị elu, dị ka nkpoda dị ka ọ na-ada. Ọ dị mkpụmkpụ, mana ọ jọgburu onwe ya. - Eeh, ọ dị mma, ọ dị mma ịlele ma kelee gị na ịrị elu steepụ nke KOM n'ụwa.
Daalụ Dan Evans, onye bụbu ọkaibe n’ugwu mba. Ọ dị mma, anyị nwere olile anya na ị nwere mmasị na edemede a na mbọ na-esighị ike anyị na-ewere COM - Anyị gbalịrị, ọ bụghị anyị? - Ọ bụrụ otu ahụ biko biko nye ya mkpịsị aka ukwu ma denye aha na ọwa ahụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ otu edemede esi esi arịgo ugwu dị elu wee pịa n'okpuru.
Kedu otu nkedo bụ klas nke asaa?
Ugwu a nwere otu gradient asaa (14%). N'akụkụ n'elu,Olee nkpodabụnkpodaokporo ụzọ? Ihe nrịgo nke ogo 45 kwekọrọ na 100-pasent ọkwa, na ha abụọ pụtara na ọsọ na-agbada otu ụkwụ kwụ ọtọ maka ụkwụ kwụ ọtọ ọ bụla.
Kedu ihe bụ 6%ọkwana ogo?
6 1. 1 9,514
7 1. 1 8,144
8 1. 1 7,115
Ọnwa Ise 14, 2020
Nchịkọta 6% dị elu?
Na-agbagharị n'okporo ụzọ awara awara, ị ga-ahụ saịn bọọdụ nke e dere “6%Ọkwa”Ma ọ bụ“Nnukwu ọkwa. ” Iheọkwanke okporo ụzọ bụ, n’ezie, mkpọda ya. Otu mkpọda isii pụtara na ụzọ elu ụzọ na-agbanwe6ụkwụ maka 100 ụkwụ ọ bụla nke ogologo ntanetị (Ọgụgụ 1.3).
Ndewo, a bụ m John Green, nke a bụ Crash Course US History, ma taa anyị ga-amụta maka otu n'ime oge kacha mma n'oge niile: 1920s. Ndị 20s nyere anyị jazz, ihe nkiri, redio, ịpụta n'ụgbọala, mmanya na-akwadoghị, na 20s wetara anyị ọganihu - ọ bụrụ na ọ bụghị maka mmadụ niile - na ndị omempụ, ọdịbendị ndị ahịa na-adabere na kredit, na ajọ mbunobi megide ndị kwabatara na mgbe niile , kasị njọ nsogbu nsogbu US na mgbe. Green, Mr.
Green, ma gịnị banyere Gatsby? Ee, m site n'oge gara aga, ọ bụ eziokwu na Gastby mechara bụrụ ọfụma n'ikpeazụ, mana ihe na-achụ Gatsby, ihe na-enweghị ntụ na-esochi nrọ ya, mechiri oge m nwere mmasị na nchekasị gbawara agbawa na nkụda mmụọ nke ndị mmadụ iji gosipụta * Okwu Isiokwu * Ya mere enwere echiche doro anya nke 1920s dị ka 'Rogha 20s', afọ iri nke mgbanwe mgbanwe na omenala ọhụụ ọhụrụ, yana nnwere onwe na ịgba egwu dị ukwuu, na ọ bụ oge ịba ụba akụ - maka ụfọdụ ndị mmadụ. Okwu nke afọ iri ga-agakwuru Onye isi ala Massachusetts anyị, Calvin Coolidge, bụ onye kwuru na Jay-Z ga-eme nke a maka afọ 21. Mana agbanyeghị, na 1920s gọọmentị na-enyere azụmahịa ahụ aka dịka otu ndị omempụ na-eto tumadi site ịghara ịchịkwa ya ma ọlị.
A maara nke a dị ka 'laissez-faire' capitalism. Ma ọ bụ 'laissez-faire' ikeketeorie ma ọ bụrụ na ị na-asụ French nke ọma. Ndi Republican Party chịrị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na 1920, yana ndị isi oche niile ahọpụtara n'ime afọ iri bụ ezigbo ndị Conservative Republicans.
Gọọmentị etiti gbasoro ụkpụrụ amụma nke ndị na-ahụ maka azụmaahịa na-amasị, gụnyere ụtụ isi dị ala na uru onwe onye na nke ụlọ ọrụ na mbọ iji belata ike otu azụmahịa. Ndị isi ala Harding, Coolidge, na Hoover kwụlitere bọọdụ nke Federal Reserve na Federal Trade Commission na ụmụ nwoke ndị nwere echiche azụmaahịa ha ma megharịa obodo ahụ ka ọ ghara inwe usoro mmekọrịta akụ na ụba na-aga n'ihu. Nke ahụ dị mma maka akụ na ụba America, ọbụlagodi na obere oge.
E gosiputara 1920s site na nrụrụ aka gọọmentị, ihe ka ọtụtụ n'ime ya sitere na nchịkwa nke Warren G. Harding. Harding n'onwe ya abụghị onye nrụrụ aka, mana o nwere ezigbo ndị enyi.
Ha gụnyere Attorney General Harry Daugherty, onye were ego iji zere ịkatọ ndị omekome, yana odeakwụkwọ nke ime obodo bụ Albert Fall, onye nara ọkara nde dollar site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji nweta ego maka steeti mmanụ dị na Teapot Dome. Ikpe mechara bụrụ onye mbụ kọmitii a mara ikpe mpụ, mana ọzọkwa, azụmahịa, nwoke! Nrụpụta rụpụtara n'ụzọ dị egwu, nke ukwuu ka ụlọ ọrụ ndị toro eto nakweere usoro usoro mgbakọ nke Henry Ford na ụlọ ọrụ ọhụụ dịka mbara igwe, kemikal, na elektrọnik toro iji nye ndị America ngwaahịa ọhụrụ na ọrụ ọhụụ. N’afọ ndị 1920, mmepụta ụgbọala na-eme kwa afọ rịrị elu ruo nde 4.8, na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ ụgbọala ji nke nta nke nta gbasie ike n’ime nnukwu mmadụ atọ anyị maara taa: Ford, Chrysler na Harley-Davidson.
Kedu? General Motors. Ka ọ na-erule afọ 1929, ọkara nke ezinụlọ ndị America niile nwere ụgbọ ala na ịhụnanya ịhụnanya America na ụgbọ ala malitere, bụ nke a na-emekarị ịhụnanya, nke mere na a bịara mara scars ahụ dị ka ụgbọ ịnyịnya scootolooping na 1920s. Kedu ihe bụ nke a? A kpọrọ ha brothels na wiil? Na onodu aku na uba toro, dika ulo oru ndi America bawanyere na mba ofesi ma ntinye ego nke ndi America kariri mba ozo.
Dollar gbanwere paụnd dịka ego azụmaahịa bụ isi, na njedebe nke afọ iri America mepụtara pasent iri asatọ na ise nke ụgbọ ala ụwa na pasent iri anọ nke ngwaahịa niile ọ rụpụtara. Stan nwere ike ịnweta nnabata? Ndị ụlọ ọrụ mepụtara ụdị ọrụ nchekwa ọrụ niile, dị ka ndị na-ehicha agụụ, ndị toaster, ndị na-eme ntụ oyi, na ha agaghị eji ụbọchị niile saa uwe gị ma ọ bụ tụgharịa tost nke gị, dịka ọ bụ omume nkịtị ma ọ bụ pụtara na ndị America ga-enwe oge n'efu. , nke a bụkwa nke e mere site na redio na egwuregwu baseball, egwuregwu ịkụ ọkpọ, ezumike, ịgba egwu ara. Echere m, tupu ụdị Gangnam, e nwere ikuku na Charleston, mana ọ nwere ike bụrụ ihe ntụrụndụ kachasị dị mkpa bụ ihe nkiri, ọ bụghị naanị na m na-ekwu nke a n'ihi na m na-ele igwefoto anya.
citi igwe kwụ otu ebe nyocha
Industrylọ ọrụ ihe nkiri America kwagara Hollywood tupu Agha Iwa Mbụ n'ihi na ala ahụ dị ọnụ ala ma baa ụba, anwụ niile pụtara na ị nwere ike gbaa n'èzí n'afọ niile ma ihe niile dị nso: ọzara, ugwu, oké osimiri, ndị dọkịta na-awa plastik. Ka ọ na-erule afọ 1925, ụlọ ọrụ ihe nkiri America ekpuchila ndị niile na-asọmpi ya na ọ bụ ya kachasị ukwuu n'ụwa, ọkachasị mgbe ị gụrụ site na mpịakọta karịa ogo, na ọtụtụ mmadụ nwere ego iji lelee ihe nkiri ndị a n'ihi ụgwọ ndị ahịa. Ojiji kredit zuru ebe niile yana ịzụrụ atụmatụ zubere pụtara na ọ ga-anabata nnabata ụgwọ iji jigide ụkpụrụ ibi ndụ ndị America, nke a bụ nnukwu mgbanwe na omume.
Taa, anyị anaghị ewere kaadị kredit dị ka ụgwọ. Ma ha bụ. Nke ahụ bụ echiche ọhụrụ, dịka akụkụ ọzọ nke ndụ ndị America na 1920s nke ka na-adị: ama ama.
A na-akpọkarị onye na-agụ egwú Opera Enrico Caruso dị ka onye mbụ a ma ama n'oge a, mana ugbu a, ọ bụ onye a ma ama karịa Charlie Chaplin ma ọ bụ Rudolph Valentino ma ọ bụ Babe Ruth nke mere ka ọ dị ntakịrị mma. Ugbu a, Lindbergh abụghị onye ama ama ama dị ka ama ama maka ama ama, mana ọ na-azụ ahịa karịa onye ọchụnta ego. Omenala dị elu tokwara nke ọma.
Nke a bụ afọ ọgbọ ọgbọ America furu efu, ọtụtụ n'ime ha biri ma rụọ ọrụ na Europe, mana America nwere ụdị nke Paris na New York. Afọ nke 1920s hụrụ mbugharị nke ndị Africa America si na ndịda gaa obodo ndị dị na mgbago ugwu, Harlem ghọrọ isi obodo Black America. N'ikwu okwu banyere Mbugharị, ka anyị kwaga ugbu a n'oche maka akwụkwọ Mystery.
Iwu dị ebe a dị mfe: Echere m, onye edemede nke akwụkwọ ihe omimi, ma m ziri ezi ma ọ bụ na ụjọ juru m. Ọ dị mma, ka anyị hụ ebe anyị rutere.Anyị ga-anwụrịrị ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka a na-achụgharị ezì ma detuo ya n'ebe adịghị mma ebe Roundus na-agba ara na ndị nkịta agụụ na-agụ, na-eme ka ahịa ha bụrụ ọbụbụ ọnụ
Dị ka ụmụ mmadụ, anyị ga-eche ihu igbu ọchụ, ngwugwu ụjọ nke a na-agbanye na mgbidi, nwụọ, mana ịlụ ọgụ. ”Daalụ maka uri, enwere m ekele na ọ bụghị akwụkwọ a na-amaghị ama nke narị afọ nke 18 blah blah blah Ọ bụ Claude McKay Harlem Renaissance poet, a na-akpọ uri 'Ọ bụrụ na Anyị Ga-anwụ'. Adị m mma na ya.
Ugbu a amaara m na site na foto naanị, ọkachasị akara banyere 'ndị ara na-agba ara na ndị agụụ na-agụ' bụ ndị n'ụzọ ihe atụ na n'ụzọ nkịtị ga-anọchite anya ndị na-enweghị ebe obibi na lynchings, mana ịkwụ ụgwọ ebe a bụ echiche kachasị anyị ga-ada. Nke a bụ akụkụ nke mmụọ nke Harlem Renaissance nke jụrụ echiche na ajọ mbunobi ma chọọ ime emume ahụmịhe Afrika. Ka ọ dị ugbu a, ihe agbanweela maka ụmụ nwanyị, ebe ha chọtara ụzọ ọhụrụ iji gosipụta nnwere onwe.
Flapị na-eme ka ntutu na uwe mwụda ha dị mkpụmkpụ, na-ese anwụrụ ma na-a drankụ mmanya n'ihu ọha, ma jiri ọgwụ mgbochi. Ndị ahịa ahụ wee gbaa ha ume ịzụrụ ngwaahịa dịka sịga, nke Edward Bernays mere baptizim. Otú ọ dị, nnwere onwe nwere ókè; A ka na-atụ anya ka imirikiti ụmụ nwanyị lụọ di na nwunye, mụọ ụmụ, ma chọta nnwere onwe ha n'ụlọ site na iji igwe eji asacha, mana foto nke akụnụba, dị ka mgbe niile, dị mgbagwoju anya karịa ka esiri hụ ya.
Eziokwu ahụ ọtụtụ ndị America gara n'ụgwọ iji mezuo Nrọ America ahụ pụtara na ọ bụrụ na akụ na ụba akwụsị, a ga-enwe nnukwu nsogbu. Anyi abiaru n’echiche. Ekesighi ndi mmadu bi na 1920s.
Ezigbo ụgwọ ọrụ ụlọ ọrụ bilitere otu ụzọ n'ụzọ anọ n'etiti 1922 na 1929, mana uru ụlọ ọrụ bilitere ugboro abụọ ngwa ngwa. Na 1929, otu pasent nke ụlọ akụ mba ahụ na-achịkwa pasent 50 nke akụnụba mba, pasent ise kasị baa ụba nke ndị America na-enweta ego mba gafere nke pasent iri isii. A na-eme atụmatụ na otu onye n'ime mmadụ ise ọ bụla nọ na America bi ogbenye ọnụ ntụ.
Ọtụtụ ndị America na-eme nnukwu azụmahịa taa, a na-elekwa Wall Street anya dị ka dike, ikekwe n'ihi na ihe dịka nde ndị America 1.5 nwere ụdị ngwaahịa ụfọdụ na 1920, mana nnukwu azụmaahịa pụtakwara na obere azụmaahịa efuru. Na 1920, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na n'ichepụta dara 5% na nke mbụ ma ọ bụghị nke ikpeazụ.
Ugbu a ụfọdụ n'ime ọrụ ndị a agbanweela site na ọrụ ọhụrụ na azụmaahịa na agụmakwụkwọ, mana dị ka afọ ndị 1920, New England malitere ịhụ nrụpụta ọrụ nke enweghị ọrụ mgbe ụlọ ọrụ textile kwagara na ndịda, ebe ọrụ dị ọnụ ala ma ndị ọrụ na-arụ ọrụ ka dị imirikiti ndị America na ị gaghị enwe ike ị nweta ngwa ngwa ndị a gbanwere, dịka na 1930, pasent 75 nke ezinụlọ ndị America enweghị igwe eji asa akwa ma naanị pasent 40 n'ime ha nwere redio. Ọ dịkarịrị njọ nye ndị ọrụ ugbo bụ ndị gara nke ọma n'oge Agha Worldwa Mbụ mgbe gọọmentị na-akwado ọnụahịa ala iji nọgide na-arụ ọrụ maka agha ahụ, mana mgbe enyemaka ahụ kwụsịrị, mmepụta ala adaghị, ọkachasị n'ihi igwe ọrụ na ike ojiji nke fatịlaịza. Ego ndị ọrụ ugbo dara nwayọọ nwayọọ, ọtụtụ hụkwara ka ụlọ akụ na-amanye ihe onwunwe ha.
Maka oge mbụ na akụkọ ntolite America, ọnụ ọgụgụ nke ugbo belatara na 1920s. Maka ndị ọrụ ugbo, Nnukwu Mbido ahụ malitere n'oge. Daalụ chere afụ.
Ya mere, na mkpokọta, gọọmentị etiti emeghị obere ihe iji nyere ndị ọrụ ugbo ma ọ bụ ndị ọrụ aka. Thelọikpe Kasị Elu bụ naanị akụkụ nke gọọmentị mere ka echiche ndị na-aga n'ihu na-adị ndụ mgbe ha malitere ịmepụta usoro echiche anyị na-akpọ ikike nnwere onwe obodo. Ugbu a ụlọ ikpe ahụ tozuru oke ịkwado nkatọ nke ndị nkatọ nke aka ekpe nke gọọmentị mana ọ ji nwayọ na-amalite ịnakwere echiche ahụ na ndị mmadụ nwere ikike igosipụta echiche na-enweghị isi n'ihe Oliver Wendell Holmes kpọrọ 'ahịa echiche'.
Na nso vs. Minnesota, Courtlọikpe Kasị Elu wepụrụ mmachi akwụkwọ akụkọ, na 1927 Justice Brandeis dere, sị, 'Nnwere onwe iche echiche otu ịchọrọ na ikwu okwu otu ị chere si dị mkpa iji chọpụta na ịgbasa eziokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị.' Mana n'agbanyeghị ịba ụba nnwere onwe ikwu okwu na ọwa nke nnwere onwe na flapper na Harlem Renaissance, 1920s bụ n'ọtụtụ ụzọ oge mmeghachi omume na akụkọ ntolite America.
Iji maa atụ, afọ iri ahụ nlọghachitere Ku Klux Klan n'ụdị ọhụụ na nke ka mma, site na mma ana m atụ ya egwu karịa. N'ịbụ nke hyperpatriotism kwalitere n'oge Agha Iwa Mbụ, ndị Klan katọrọ ndị kwabatara na ndị Juu na ndị Katọlik dị ka ihe na-erughị otu narị pasent America, site na etiti 1920s Klan nwere ihe karịrị nde mmadụ 3 na ọ bụ nzukọ nzuzo kachasị na m. ulo steeti Indiana. Dika otutu ndi si mba ozo bia site na ndida na odida anyanwu Europe, otutu mgbe ndi Katolik na ndi Ju, ndi ocha Protestant choro ka ha ghara inwe ochichi.
Okwu nbibi: Ọ ga-adịrị gị mma Ndị Protestant White Iwu izizi igbochi mbata na ọpụpụ ka agafere na 1921, belata ọnụ ọgụgụ ndị mbata si Europe ruo 357,000. Na 1924, iwu ọhụrụ banyere ọpụpụ wedara ọnụ ọgụgụ ahụ ruo 150,000 ma debe ihe nha dabere na obodo.
jidere ike na ogologo ndụ
Onu ogugu ndi kwabatara site na ndida na odida anyanwu Europe belatara nke ukwuu na amachibidoro ndị Asia, ewezuga ndị Filipinz. E debere ọnụ ọgụgụ ndị Filipinas na 50 kwa afọ, ọ bụ ezie na a ka kwere ka ha kwaga Hawaii n'ihi na a chọrọ ọrụ ha n'ebe ahụ. Agbanyeghị, enweghị mmachi na mbata na ọwụwa anyanwụ, dị ka nnukwu ugbo California si dabere na ndị ọrụ oge si Mexico.
Mmetụta nke ndị anarchist na-agbanwe agbanwe na echiche pseudoscientific gbasara agbụrụ; Ewere ndị ọcha ka ndị sayensị karịa ndị nwere agba sayensị, dịka Onye isi ala Coolidge n'onwe ya kwupụtara mgbe ọ bịanyere aka na Iwu Immigrashọn nke 1924, 'America ga-anọrịrị America.' Gwa m, Calvin Coolidge, ị bụ onye America. You bụ Cherokee, Cree ma ọ bụ Lakota? Esemokwu dị n'etiti agụmakwụkwọ sayensị na United States na nkwenkwe okpukpe gbasikwara ike na 1920s.
Ihe atụ a kacha mara amara bụ n’ezie, ikpe 1925 nke John Scopes na Tennessee. E boro Scopes ebubo imebi Iwu megide Ozizi Evolution, nke ACLU gbara ume ka ọ bụrụ ikpe maka nnwere onwe ikwu okwu. William Jennings Bryan, bụ onye ị ga-echeta na-adịbeghị anya gbara arụkwaghịm dị ka onye ode akwụkwọ nke State na onye ghọrọla onye ndu nke ndị isi Ọchịchị Scum.
Scopes na Darrow tụfuru ikpe ahụ n'ezie, mana ikpe ahụ dọtara uche mba ma mesịa mee ka a na-akụzi evolushọn n'ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ nke America. A na-ahụkarị usoro Scopes dị ka mmeri nke echiche efu, sayensị na oge a, echekwara m na ọ bụ, mana m ka ọ bụ akara nke mmegiderịta nke 1920s. Nke a bụ afọ iri nke wetara anyị ahịa ahịa na ofufe ndị ama ama, nke dị mkpa na ihe nketa siri ike.
Ọ bụkwa oge ọmụmụ nke oge a nke ikike nke nnwere onwe obodo. Ọ bụ oge nnwere onwe ghọrọ uru dị mkpa, mana n'otu oge ahụ ọnụ ọgụgụ lynchings mụbara. Ndị kwabatara dị mkpa maka mmụba akụ na ụba nke 1920s, mana n'otu oge ahụ pere mpe ka a hụrụ ha dị ka ihe iyi egwu nke ụkpụrụ ọdịnala America, nke ahụ na-ajụkwa ajụjụ anyị ka na-alụ taa: gịnị bụ ụkpụrụ ndị a? Anaghị m ekwu okwu a, biko mee ka m mara na nkọwa.
Daalụ maka ikiri. Lee gị n'izu na-abịa. Crash Course mepụtara ma duzie ya bụ Stan Muller, onye na-ahụ maka edemede anyị bụ Meredith Danko, onye na-emekọ ihe bụ Danica Johnson, bụ onye nkuzi akụkọ ihe mere eme nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị, Raoul Meyer, Rosianna Rojas dere, na mụ onwe m na ndị otu eserese anyị bụ Thought Cafe.
I. kpọgidere ya. Kwa izu enwere ederede ọhụrụ maka Libertage.
Nwere ike ịkọwa nke gị n'okwu ma ọ bụ jụọ ajụjụ banyere isiokwu taa, nke ndị otu akụkọ ihe mere eme ga-aza. Daalụ maka ikiri Crash Course. Ọ bụrụ na ihe omume taa masịrị gị, denye aha na ya.
Dị ka anyị na-ekwu n’obodo m: echefula! ịbụ onye ukwu.
Kedu ihe mkpọda 6%?
A ụzọ akara na-egosi a6% ọkwa, ma ọ bụ6%ndida. A isii percentndidapụtara na ụzọ elu ugwu na-agbanwe6ụkwụ maka 100 ụkwụ ọ bụla nke ogologo ntanetị (Ọgụgụ 1.3). A ụzọ ịrị na agrajentịnke6pasent. Zọ na-erite uru6ụkwụ na elu maka ọ bụla 100 ụkwụ nke ntanetị anya.
Kedu otu oke nke ịnya ụgbọ ala siri ike?
O doro anya, akụkụ nke mkpọda ekwesịghị ịbụ ihe ọ bụla dị elu karịa 12% ma ọ bụ 15% n'ọtụtụ ọnọdụ. Agbanyeghị, n'ọnọdụ ụfọdụ, dị ka agbata ugwu ma ọ bụ ebe ugwu, enwere ike ikwe ka ọ gbagoo. Kachasi ọkwa enyere maka ndị ọkwọ ụgbọala na-abụkarị ịrị elu 25-ụkwụ n'ogologo 100 ụkwụ ma ọ bụ ịrị elu 25%.
Kedu ihe bụ 12% ọkwa?
Nke iri na abụọọkwa, agadi afọ, ma ọ bụklas 12bụ afọ ikpeazụ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị n'ọtụtụ ebe na North America. Mba ụfọdụ nwere nke iri na atọọkwa, ebe mba ndị ọzọ enweghị nke iri na abụọọkwa/ afọ ma ọlị. Nke iri na abụọọkwaọ bụ afọ ikpeazụ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị (afọ ngụsị akwụkwọ).
Kedu ka mkpọda 6% dị?
A isii percentndidapụtara na ụzọ elu ugwu na-agbanwe6ụkwụ maka 100 ụkwụ ọ bụla nke ogologo ntanetị (Ọgụgụ 1.3). Nyocha 1.3. A ụzọ ịrị na agrajentịnke6pasent. Zọ na-erite uru6ụkwụ na elu maka ọ bụla 100 ụkwụ nke ntanetị anya.
Kedu ọkwa 5%?
Iheọkwabụ naanị ebili / ọsọ x 100. Ọ bụrụ na ị rịgoro5ụkwụ maka ụkwụ ọ bụla 100 n'okporo ụzọ, ọ bụ a5%ọkwa. Steve.
Ugwu a dị mkpụmkpụ, ọ dị mma?
Mgbeazụna-enweta kwankpoda, ọ nwere ike ịmepụta ọtụtụ Ngabiga flaws. Ndị a swing flaws ga-achọ akwụ ụgwọ na oge na-aga see a àgwà golf shot. Mgbe aro na-arụkwa ọrụnkpodan'imeazụ, ọ na - eme ka onye ọkpụkpọ ahụ rịa elu ubu ha.
Akwụkwọ ndekọ ọkwa dị larịị ọ ga-enwerịrị?
Site na ntuziaka ndị a, ị ga-adị. Mountain gafere na ọkwa dị elu nke akara akara bụ RV Ga-enwerịrị! Enwere okwu ochie n’etiti ndị na-anya gwongworo. 'E nwere ụdị ndị ọkwọ ụgbọala abụọ - ndị nọ na nsogbu na ngabiga ugwu, na ndị ga-anọ.'
Ọ dị mkpa ịmara banyere akara ule dị elu?
Mara tupu oge eruo banyere akara akararịrị bara uru nwere ike ịba uru. Ọ bụrụ na ụgbọ gị emeela agadi ma ọ bụ na arụbeghị mmezi na nwa oge, brek ma ọ bụ injin gị nwere ike ọ gaghị agbadata gị ma ọ bụ gbagoo mpaghara ugwu. Anyị ga-enyekwa ndepụta ụlọ ahịa ndozi na gburugburu ebe ndị a maka mma gị.
Kedu ọkwa kacha elu na San Francisco?
Okporo ụzọ ahụ abụrụla akụkụ nke agba ịnyịnya ígwè kemgbe 1983. San Francisco Municipal Railway na-arụ ọrụ ụgbọ ala n'etiti ugwu ndị dị n'obodo ahụ. Ugwu di elu maka oru bọs bu 23.1% site na 67-Bernal Heights na Alabama Street n’etiti Ripley na Esmeralda Streets. Ihe ngosi ịdọ aka ná ntị 30%, karịa 1500 m. La Route des Crêtes, Cassis, France